WTE အကျိုးကျေးဇူးရလဒ်ရယူ - World Trade Exchange
JOIN WTE အကျိုးကျေးဇူးများကိုအောက်တွင်ရယူပါ။
WTE ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ရန်အတွက်ဒေါ်လာ ၅၀ ဘီလီယံမှ ၅၀ ဘီလီယံအားဖြင့်သင့်အားပေးလိမ့်မည်
WTE ၂၄ နာရီအတွင်းလူနေအိမ်နှင့်စီးပွားဖြစ်အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူမှုသို့မဟုတ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်အတွက်ဒေါ်လာ ၅၀ မှ ၅၀ ဘီလီယံအထိသင့်အားအတိုးမဲ့ချေးငွေဖြင့်သင့်အားပေးလိမ့်မည်။ ဤငွေကြေးကိုစျေးဝယ်စင်တာများ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ရုံးအဆောက်အအုံများကဲ့သို့သောစီးပွားဖြစ်ပစ္စည်းများကိုဆောက်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်ဝယ်ယူရန်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းချေးငွေများကိုဖွဲ့စည်းပုံအသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း၊ ရှိပြီးသားအဆောက်အအုံကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ အိမ်ခြံမြေ ၀ ယ်ယူခြင်း (သို့) ရှိပြီးသားအဆောက်အ ဦး များကိုချဲ့ထွင်ခြင်းများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ချေးငွေများ၊ စာရွက်စာတမ်းများတောင်တန်းများသို့မဟုတ်ရိုးရာငွေချေးသူများ၏ရူးသွပ်ခြင်းဆိုင်ရာအရည်အချင်းလိုအပ်ချက်များကိုမဆင်ခြင်ဘဲစောင့်ဆိုင်းရန်အချိန်မရှိတော့ပါ။ ပေးသောအတိုးမဲ့ချေးငွေအတွက်ဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလီယံအထိရှိသည် WTE ၂၄ နာရီအတွင်း၊ သင်သည်အောက်ပါတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
ပိုင်ရှင် ၀ ယ်ယူထားသောစီးပွားဖြစ်အိမ်ခြံမြေများကို ၀ ယ်ယူပြုပြင်မွမ်းမံပါ။
ရှိပြီးသားအဆောက်အ ဦး ကိုတိုးချဲ့သို့မဟုတ်တိုးချဲ့ပါ။ သင်၏လက်ရှိနေရာကိုကျော်ပြီးသောအခါစတုရန်းရိုက်ချက်ကိုထည့်ပါ။
အိမ်ခြံမြေအသစ်တစ်ခု၏ဝယ်ယူစျေးနှုန်းသို့မဟုတ်အကဲဖြတ်တန်ဖိုး၏ ၁၀၀% အထိငွေကြေးထောက်ပံ့ပါ။
စိတ်ဝင်စားမှုမရှိ ချေးငွေမစစ်ဆေးပါ စုဆောင်းခြင်းမရှိပါ။ ချေးငွေမယူပါ။ ငွေပြန်အမ်းခြင်းမရှိပါ WTE သင့်အားကြွေးတင်ကိုလျှော့ချရန်လိုအပ်သည့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုယေဘုယျအားဖြင့်သင့်အားကူညီပေးပါမည်။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင်အခမဲ့ရလိမ့်မည် WTE အဖွဲ့ဝင်။
WTE စီးပွားရေးတိုးချဲ့မှုအတွက်စိတ်ဝင်စားမှုအခမဲ့ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာဒေါ်လာ ၅၀ မှဒေါ်လာ ၁၀၀ ဘီလျံဖြင့်သင့်အားပေးမည်။
ဘဏ်ချေးငွေများနှင့်မတူဘဲကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ချေးငွေပမာဏကိုမတိုးမြှင့်မီသင့်ချေးငွေရမှတ်၊ ဝင်ငွေ၊ ငွေစီးဆင်းမှု၊ သိုက်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ အပေါင်ပစ္စည်းအာမခံ၊ အခွန်ပြန်ပို့ချက်၊ ဘဏ္statementာရေးရှင်းတမ်း၊ ။
ပေးထားသောစီးပွားရေးတိုးချဲ့ချေးငွေအပေါ်အတိုးမပေးပါ။ စိတ်ဝင်စားမှုကင်းတယ် အရေးအကြီးဆုံးကတော့မင်းတို့ရဲ့အကြွေးတွေပြန်ဆပ်ဖို့ငါတို့ကူညီမပေးရင်ပြန်ဆပ်စရာမလိုဘူး။ သင့်အားစီးပွားရေးတိုးချဲ့ချေးငွေများပေးပြီးနောက်သင်ကြွေးမြီကိုထေမိစေရန်လိုအပ်သည့် ၀ င်ငွေကိုကူညီပေးပါမည်။
အောက်ပါတို့အပါအ ၀ င်သင်၏ချဲ့ထွင်သောရည်မှန်းချက်များကိုအောင်မြင်ရန်စီးပွားရေးတိုးချဲ့မှုအကြွေးကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်များကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်ရန်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုအသစ်များကိုစတင်ရန်နှင့်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာမီဒီယာများ (သတင်းစာများ၊ မဂ္ဂဇင်းများ၊ ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားဌာနများ) တွင်ကြော်ငြာပါ။
လူနေအိမ်နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းအမျိုးအစားများ (စျေးဝယ်စင်တာများ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ရုံးအဆောက်အအုံများစသဖြင့်) ကို ၀ ယ်ယူပါ။
စီးပွားရေးသို့မဟုတ်စျေးကွက်အသစ်များ (ပြည်တွင်း၌သာမကပြည်ပ) သို့ခွဲခြားပါ။
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်ကုမ္ပဏီများ၊ စက်ယန္တရားများ၊ စက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်နည်းပညာအသစ်များကိုရယူပါ။
သင်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်နေရာများ၊ ဂိုဒေါင်များသို့မဟုတ်ရုံးများကိုချဲ့ထွင် / ပြန်လည်ပြုပြင်ပါ။
ပစ္စည်း၊ ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလေကြောင်း၊ ကြော်ငြာ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ စက်မှု၊ ကွန်ပျူတာ၊ စက်ပစ္စည်းများ၊
WTE အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုအတွက်သင့်အားဒေါ်လာ ၅၀ ဘီလီယံမှ ၅၀ ဘီလီယံအထိအတိုးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်သင့်အားပေးလိမ့်မည်
၀ င်ငွေ ၀ င်ငွေ၏ ၀.၂% တွင်တင်သွင်းခြင်းနှင့်တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာငွေကြေးရယူပါ။
WTE သွင်းကုန်၊ ပို့ကုန်များနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအတိုးလုံးဝချေးငွေဖြင့်သင့်အားပေးလိမ့်မည်။
သုညကုန်ကျစရိတ်မှာ ၂၄ နာရီအတွင်းပြန်လည်နေရာချထားသည့်ရန်ပုံငွေများ -
WTE ၂၄ နာရီအတွင်းမည်သည့်ပိတ်ဆို့ထားသည့်ရန်ပုံငွေကိုမဆိုသင့်အားသုညကုန်ကျစရိတ်ပြန်လည်ပေးအပ်ရန်သင့်အားအတိုးမဲ့သုညချေးငွေများပေးလိမ့်မည်။
တရား ၀ င်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲခြင်းထိန်းချုပ်မှုများ -
WTE သင့်အား RAW ပစ္စည်းများအတွက်ဒေါ်လာ ၅၀ ဘီလီယံမှ ၅၀ ဘီလျံအထိငွေချေးပေးမည်
WTE ကုန်ကြမ်းအမျိုးအစားအားလုံးကို ၀ ယ်လိုအားသုညရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ၀ ယ်ယူရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ ပြန်လာအတွက် WTE သင့်ကုန်ကြမ်းမှထုတ်လုပ်သောကုန်ချောများကိုငွေပေးချေမှုအဖြစ်လက်ခံသည်။
ကြိုတင်ပေးငွေမပေးပါ ထောက်ပံ့ပေးသောကုန်ကြမ်းများမှထုတ်လုပ်သည့်ချောထုတ်ကုန်များကို အသုံးပြု၍ သင့်အားအကြွေးပြန်ဆပ်ရန်သာလိုအပ်သည်။
WTE ကြော်ငြာခြင်းအတွက်ဒေါ်လာ ၅၀ ဘီလီယံမှ ၅၀ ဘီလျံအထိသင့်အားပေးမည်
WTE သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ကြော်ငြာများအတွက် ၀ င်ငွေ ၀ င်ငွေ 0% ရှိလိမ့်မည်။
WTE ဒေသတွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာမီဒီယာများ (သတင်းစာများ၊ မဂ္ဂဇင်းများ၊ ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများ) ၌သင်ကြော်ငြာရန်ကူညီရန်အတိုးနှုန်းလုံးဝမရှိသည့်ကုန်သွယ်မှုခရက်ဒစ်ကိုပေးလိမ့်မည်။ တနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကြော်ငြာစရိတ်အားလုံးကိုမီဒီယာအမျိုးမျိုး (ဒေါ်လာသန်း ၅၀ မှ ၅၀ ဘီလီယံအထိ) အတွက်ပေးချေလိမ့်မည်။
ပေးထားသောကြော်ငြာခရက်ဒစ်အပေါ်အတိုးမပေးပါ။ စိတ်ဝင်စားမှုကင်းတယ် အရေးအကြီးဆုံးကတော့မင်းတို့ရဲ့အကြွေးတွေပြန်ဆပ်ဖို့ငါတို့ကူညီမပေးရင်ပြန်ပေးစရာမလိုဘူး။ သင့်ကိုအကြွေးပေးပြီးနောက်ကြွေးမြီကိုထေမိစေရန်လိုအပ်သော ၀ င်ငွေကိုထုတ်ပေးရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကူညီလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကြွေးမြီများကိုထေမိစေရန် ၀ င်ငွေအလုံအလောက်မည်သို့ရရှိမည်ကိုစိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။
WTE သင်၏စီးပွားရေးကို ၂၄ နာရီအတွင်းသင်၏အပြည့်အ ၀ တောင်းသောစျေးနှုန်းဖြင့်သင်၏စီးပွားရေးကို ၀ ယ်ယူပါမည်။
မင်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမြန်မြန်ရောင်းဖို့ရှာနေသလား။ မင်းစောစောအနားယူချင်နေသလား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏ဖိစီးမှုနှင့်ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုသင်ငြီးငွေ့ပါသလား။
WTE သင်၏လုပ်ငန်းအတွက်ကြိုတင်ငွေပေးဆောင်ရမည့်ငွေကိုဝယ်သူသည်သင်၏ကုမ္ပဏီအပေါ်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း။
သင့်တွင်မည်သည့်စီးပွားရေးအမျိုးအစားရှိသည် - အရေးမကြီးသောငွေပမာဏ - အမြတ်သို့မဟုတ်အရှုံးဖြစ်စေသည်။
သင်၏ကုမ္ပဏီမည်မျှပင်တန်ဖိုးရှိနေပါစေဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံ၊ ဒေါ်လာ ၁၀၀ မီလီယံ၊ ၁၀ ဒေါ်လာဘီလီယံသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောကိစ္စရပ်များမှာအရေးမကြီးပါ။
သင်၏စီးပွားရေးကိုရောင်းချရန်ထက်သင်၏စီးပွားရေးကိုရောင်းရန်ပိုမိုမြန်ဆန်လွယ်ကူသော၊ အာမခံနိုင်သည့်နည်းလမ်းမရှိပါ WTE.
မင်းရဲ့စီးပွားရေးကိုဘာကြောင့်ရောင်းတာလဲ WTE? ၁။ ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုအားလုံးနှင့်အတူရိုးရှင်းလွယ်ကူသောဖွဲ့စည်းပုံ။ ၂။ ရွှေလက်ထိပ်ခတ်မ - တည်ထောင်သူများသည်ဆက်နေရန် (သို့) သွားနိုင်သည်။ ငါတို့ကပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိတယ်။ ၃။ ယဉ်ကျေးမှုအပြောင်းအလဲမရှိဘဲလုပ်ဆောင်ပါ။
၅ ။ sketchy ပစ္စည်းပစ္စယမရှိပါ။
WTE သင်၏ FRANCHISE၊ စီးပွားရေးလိုင်စင်၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ နာမည်အပြည့်အစုံသို့မဟုတ် ၂၄ နာရီအတွင်းသင်၏စျေးနှုန်းအပြည့်အစုံကိုဝယ်ယူပါလိမ့်မည်။
သင်၏လုပ်ငန်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ ဒိုမိန်းအမည်များ၊ အကြံဥာဏ်များ၊ ဖြေရှင်းနည်းများ၊
WTE ၂၄ နာရီအတွင်းသင်၏လုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေးလိုင်စင်၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ဒိုမိန်းအမည်သို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဝယ်ယူလိမ့်မည်။ သင်ရောင်းလိုသည့်ပစ္စည်း၏ငွေကြေးတန်ဖိုးမည်မျှပင်အရေးမကြီးပါ ($ 24M မှ $ 10B)၊ WTE 24 နာရီအတွင်းသူတို့ကိုမဝယ်ပါလိမ့်မယ်။ 100% အာမခံချက်။ ၂၄ နာရီအတွင်းသင်၏ကုမ္ပဏီ၊ စီးပွားရေးပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ဂိမ်းများ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ ဒိုမိန်းအမည်များသို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရောင်းရန်အတွက်သင့်ဘက်မှမည်သည့်အလုပ်၊ အချိန်၊ အားစိုက်မှုသို့မဟုတ်အန္တရာယ်မလိုအပ်ပါ။ အလုပ်၏ ၁၀၀% သည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
WTE ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် ၁၀၀%% ပြန်လည်စတင်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်
Bill Ackman သည်ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းဒေါ်လာ ၂၇.၆ ဘီလျံမှအမြတ်အစွန်းသို့ဒေါ်လာ ၂၇ သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုသည့်အခါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် ၁၀၀၀၀% နီးပါးအမြတ်အစွန်း (အမြတ်ငွေ ၁၀၀) ပြန်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။
John Paulson သည်ဒေါ်လာ ၁၅၀ မီလီယံခန့်မှဒေါ်လာ ၁၅ ဘီလျံအမြတ်အစွန်းသို့ချေးငွေပုံသေလဲလှယ်မှုများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့် (၁၀၀% အမြတ်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု) တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၁၀၀၀၀% အမြတ်အစွန်းရရှိခဲ့သည်။
Credit Default Swap တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်လည်းသင်လည်းရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း ၁၀၀၀၀% ပြန်အမ်းငွေသို့မဟုတ်အဆ ၁၀၀ သင့်ငွေကိုပြန်ပေးနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ ကိုအကြွေးကဒ်ပြားလဲလှယ်ရေးစနစ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါကရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းဒေါ်လာ ၁၀ သန်းရလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည် credit default swap သို့ဒေါ်လာ ၁ သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါကရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ ရလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည် credit default swap သို့ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါကရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းသင်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံရရှိလိမ့်မည်။ သင်ပိုမိုရင်းနှီးလေ၊ သင်ပိုမို ၀ င်ငွေရလေဖြစ်သည်။
WTE ၂၄ နာရီအတွင်းအပြည့်အ ၀ လက်လီရောင်းချမှုတန်ဖိုးကိုသင်၏ Exessess Inventory ကို ၀ ယ်ယူလိမ့်မည်။
ရောင်း ၀ ယ်မှုနိမ့်ခြင်း၊ ငွေစီးဆင်းမှုနည်းခြင်းနှင့်ဆုံးရှုံးခြင်းများနှင့်သင်ရုန်းကန်နေရပါသလား။ သင့်ရဲ့ပိုလျှံစာရင်းအားလုံးကိုရောင်းဖို့သင်ရှာဖွေနေပါသလား
သင်သည်စာရင်းပိုလျှံနေသည်ကိုသင်တွေ့ရှိပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်ဒေါ်လာတစ်ဒေါ်လာပေးရသောငွေပမာဏကိုဖျက်သိမ်းပြီး၊ စာအုပ်တန်ဖိုး၏ ၁၀ မှ ၄၀% ကိုသာပုံမှန်အားဖြင့်နားလည်သဘောပေါက်ပါသလား။
၂၄ နာရီအတွင်းသင်၏ပိုလျှံစာရင်းအားလက်လီတန်ဖိုးအပြည့်ဖြင့် ၀ ယ်ယူရန်ဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုနိုင်ငံပေါင်း ၁၅၀ ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သွယ်ရေးမိတ်ဖက်များနှင့်ဖြန့်ဖြူးရေးလမ်းကြောင်းများမှတဆင့်ပြန်လည်ရောင်းချသည်။ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းအားလုံးကို ၀ ယ်ယူရန်အတွက်သင့်အတွက်လိုအပ်သောကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ငွေပေးချေခွင့်ရှိသည်။
၂၄ နာရီအတွင်းသင်၏ပိုလျှံသောစွမ်းရည်သို့မဟုတ်စာရင်းစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းရန်တစ်ကြိမ်တည်းသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုလိုအပ်သည်ဖြစ်စေ၊ စက်ရုံပိတ်ခြင်း၊ စီမံချက်ဖျက်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်အပြည့်အ ၀ ဖျက်သိမ်းခြင်းဖြစ်စဉ်များအတွက်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည့်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏ဖြေရှင်းချက်သို့မဟုတ်ပံ့ပိုးမှု၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှု၊ ပြည့်စုံသော ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးမိတ်ဖက်များ၏ကွန်ယက်ကိုသင်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ သင်၏ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးမည်မျှပင်ရှိပါစေ $ 24m, $ 10m, $ 100B သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောကိစ္စရပ်များမှာအရေးမပါ။ ဤသီးသန့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအဖွဲ့ဝင်များမှရရှိနိုင်သည် World Trade Exchange.
WTE ၂၄ နာရီအတွင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် ၁၂ လရောင်းအားရရှိရန်သင့်ကိုကူညီပါလိမ့်မည်။
WTE သင့်အား ၁၂ လတာ ၀ င်ငွေရည်မှန်းချက်ကို ၂၄ နာရီအတွင်းမည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုမရောင်းပဲကူညီလိမ့်မည်။ ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပို့ခြင်းကိုနောင် ၁၂ လတွင်စီစဉ်ထားနိုင်သည်။
သင်၏ကုမ္ပဏီ၏ ၁၂ လ ၀ င်ငွေရည်မှန်းချက်သို့မဟုတ်ဝင်ငွေခန့်မှန်းချက်၏တန်ဖိုးမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ“ အာမခံထားသောအနာဂတ် ၀ င်ငွေဖြေရှင်းချက်” သည်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများမတိုင်မီ ၂၄ နာရီအတွင်းသင်၏ ၁၂ လ ၀ င်ငွေရည်မှန်းချက်ကိုသင်အောင်မြင်လိမ့်မည်ဟုအာမခံသည်။
ဤရလဒ်များကိုရရှိရန်သင့်ဘက်မှအတွေ့အကြုံ၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ အလုပ်၊ အချိန်၊ အားစိုက်မှုသို့မဟုတ်အန္တရာယ်မရှိပါ။ အလုပ်၏ ၁၀၀% သည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
WTE သင်၏ဝင်ငွေကိုရက် ၃၀ အတွင်း ၁၀၀ ဆဖြင့်အမြန်နှုန်းဖြင့်ကူညီပေးပါလိမ့်မည်
WTE သင်သည်မည်သည့်အရာကိုမဆိုသင် ၀ ယ်ယူသောကုန်ကျစရိတ်တွင်သင့်အားကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ ရက်ပေါင်း ၃၆၀ အကြာတွင်သင်၏ဝယ်ယူမှုများကိုအရောင်းအ ၀ ယ်ဖြင့်ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
သင်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများကိုယခုအခါသန်းပေါင်းများစွာသောကုမ္ပဏီများမှ ၀ ယ်ယူပြီးရက်ပေါင်း ၃၆၀ အကြာတွင်အတိုးရာခိုင်နှုန်းသုညမပေးဘဲငွေပေးချေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ပိုက်ဆံ ၃၆၀ ချေးငွေဖြင့်ယနေ့အိမ်တစ်လုံးကိုဝယ်လျှင်၊ ရက်ပေါင်း ၃၆၀ ပြီးနောက်သင်စတင်ပေးချေလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ယနေ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခု၊ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၊ စက်ပစ္စည်းများ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများသို့မဟုတ်အခြားကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကို Net360 အကြွေးဖြင့်ဝယ်ယူပါကရက်ပေါင်း ၃၆၀ အကြာတွင်စတင်ပေးချေလိမ့်မည်။
WTE သင်၏စီးပွားရေးအကြွေးများအား (၇) ရက်အတွင်းသင်ပေးချေရန်ကူညီပါလိမ့်မည်
WTE သင်တစ် ဦး ချင်း၊ ဘဏ္institutionာရေးအဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၌သင်ငွေမလိုဘဲကြွေးတင်နေသောကြွေးမြီများကိုသင်ပြန်ပေးရန်ကူညီလိမ့်မည်။ သင်ပေးဆပ်ရန်ကျန်ရှိသောပမာဏသည် ၁ သန်း၊ ၁၀ သန်း၊ ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀၊ ၁၀၀ ဘီလီယံနှင့်အထက်ဖြစ်ပါစေအရေးမကြီးပါ။
၇ ရက်အတွင်းငွေဖြုန်းခြင်း၊ အကြွေးကင်းလွတ်စွာနေထိုင်ခြင်းနှင့်လုံခြုံစိတ်ချရသောဘဏ္futureာရေးအနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းမရှိဘဲသင်၏အကြွေးများအားလုံးကိုဖယ်ရှားရန်သင် ၁၀၀% အာမခံထားသည်။ ထောင်ပေါင်းများစွာသောကြွေးရှင်များနှင့်ကုမ္ပဏီများကိုငွေမဖြည့်ဘဲသူတို့၏အကြွေးများကိုဖယ်ရှားနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်သင်နှင့်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုသင်ထင်ထားသမျှထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာဖျက်သိမ်းရန်ကူညီနိုင်သည်။
ခုနစ်ရက်အတွင်းသင်၏အကြွေးအားလုံးကိုဆပ်ရန်သင့်ဘက်မှကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ အချိန်မရှိ၊ ငွေအမြန်မလိုအပ်ပါ။ အလုပ်၏ ၁၀၀% သည်သင်တို့အတွက်လုပ်ပြီးပြီ။
WTE သင်၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်ကြိုတင်ငွေမလိုအပ်သောမည်သည့်ကုမ္ပဏီ (ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာသန်းနှင့်ချီသောရာပေါင်းများစွာရှိသည့်) မည်သည့်ကုမ္ပဏီကိုမဆို ၀ ယ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ သင် ၀ ယ်လိုသည့်ကုမ္ပဏီ၏ငွေကြေးတန်ဖိုးမည်မျှပင်အရေးကြီးသည်၊ WTE သင့်အတွက်ကြိုတင်ပေးငွေမပါ ၀ င်သော ၀ ယ်ယူမှုအားအာမခံပါသည်။ သင်ဝယ်ယူလိုသည့်ကုမ္ပဏီသည်ဒေါ်လာ ၅၀၊ ၅၀၀ မီလီယံ၊ ၅၀ ဘီလျံဒေါ်လာနှင့်အထက်တန်ဖိုးရှိမရှိအရေးမကြီးပါ။
ကုမ္ပဏီကြီးသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးကြီးလား၊ သေးငယ်သည်ဖြစ်စေအရေးမကြီးပါဘူး။ ကုမ္ပဏီသည်ရင့်ကျက်သောစီးပွားရေး၊ မြန်ဆန်သောတိုးတက်မှုရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၊ လုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်နယ်ပယ်စျေးကွက်အထူးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ကိစ္စမရှိပါဘူး ၎င်းသည်လက်လီ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်မှု၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ ၀ န်ဆောင်မှု၊ နည်းပညာ၊ သင်၏ရည်မှန်းချက်မှာကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးကိုရယူရန်သို့မဟုတ်သင်ရွေးချယ်သောကုမ္ပဏီတွင်အစုရှယ်ယာအများစုကို ၀ ယ်ရန်ဖြစ်သည်ဆိုလျှင်၊ WTE သင့်ရည်မှန်းချက်ပြည့်မီရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်ကုမ္ပဏီကိုရောင်းချရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
WTE လစဉ်ဝင်ငွေဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလီယံအထိသင်လုပ်ရန်ကူညီပါလိမ့်မည်။
သင့်အားပေးသောအတိုးမဲ့ချေးငွေကိုထေမိစေရန်၊ WTE အရောင်း ၀ င်ငွေအတွက်လစဉ်ဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလီယံအထိရရှိရန်သင်ကူညီလိမ့်မည်။ ၀ င်ငွေဖန်တီးရန်သို့မဟုတ်မည်သည့်ရလဒ်မဆိုအောင်မြင်ရန်သင့်ဘက်မှအလုပ်၊ အချိန်၊ အားစိုက်မှုသို့မဟုတ်အန္တရာယ်မရှိပါ။ သင်၏အရောင်း ၀ င်ငွေရည်မှန်းချက်သည်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း၊ ၁၀၀ မီလီယံ၊ ၁၀ ဘီလျံဒေါ်လာနှင့်အထက်ဖြစ်ပါစေအရေးမကြီးပါ။ သင်၏ရလဒ်မှာ ၁၀၀% အာမခံထားသည် WTE သင့်ကိုယ်စားအရောင်း ၀ င်ငွေရရှိရန်အတွက်လိုအပ်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ရောင်းအား ၁၀၀% ကိုလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။
သင်ကပေးသောအတိုး - အခမဲ့ချေးငွေကိုအသုံးပြု။ ဝယ်ယူမှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလုပ်သည့်အခါ WTEသင်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုငွေပြန်ဆပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ WTE သင်က၎င်းကိုထေမိစေရန်လိုအပ်သောအရောင်းဝင်ငွေကိုထုတ်ပေးခြင်းဖြင့်ချေးငွေကိုပြန်လည်ပေးဆပ်လိမ့်မည်။ သို့သော်၊ သင်ထုတ်ပေးသောအရောင်းအမိန့်အားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်သည် WTE သင့်အားတိုးချဲ့ထားသောချေးငွေသည်သင့်အားအပြည့်အဝပြန်လည်ပေးအပ်သည်အထိ။
WTE သင်၏အကြီးမားဆုံးစီးပွားရေးပြPROနာများကို ၂၄ နာရီအတွင်းဖြေရှင်းနိုင်ရန်ကူညီပါလိမ့်မည်။
မိနစ်တိုင်းကိုရေတွက်ပြီးနာရီသည်အမှတ်အသားပြုလျှင်၊ WTE၂၄ နာရီအတွင်းသင်၏အကြီးမားဆုံးပြproblemsနာများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများကိုသင်ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည့်အောင်မြင်မှုများကိုအကြံပေးအဖွဲ့ကပေးလိမ့်မည်။ 24% အာမခံချက်။
သင်အကြီးမားဆုံးပြproblemsနာများကို ၂၄ နာရီအတွင်းဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည့်အောင်မြင်မှုများကိုဖြေရှင်းပေးရန်အပြင်သင့်အနေဖြင့်ဖြေရှင်းချက်များကိုလည်းအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်။ ထို့ကြောင့်, WTE သင့်ရဲ့အရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊ အရောင်း ၀ င်ငွေနည်းခြင်း၊ အမြတ်နိမ့်ခြင်း၊ ငွေကြေးစီးဆင်းမှုမလုံလောက်ခြင်း၊ စာရင်းပိုလျှံခြင်းနှင့်များစွာသောအခြားပြdaysနာများကိုရက် ၃၀ အတွင်းမှာဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်။
WTE ၂၄ နာရီအတွင်းပြီးပြည့်စုံသောစာအုပ်တွင်သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်မပြည့်မီခြင်းနှင့်စိတ်ပျက်ဖွယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများအားလုံးကိုပြန်လည်ရယူရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
WTE ၂၄ နာရီအတွင်းသင်၏မကောင်းသောချေးငွေများ၊ စိတ်သောကရောက်နေသော (သို့) မစွမ်းဆောင်နိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်အကြွေးများစုဆောင်းထားခြင်းမရှိသောချေးငွေများအားလုံး၏အပြည့်အ ၀ ရရှိသောငွေတန်ဖိုးကိုပြန်လည်ရရှိစေရန်ကူညီလိမ့်မည်။ အရှုံးမရှိ၊ မချရေး၊
၂၄ နာရီအတွင်းသင်၏ချေးငွေများ၊ ပြressedနာများနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်စုဆောင်းစရာမရှိသောရရန်ရှိသောစာရင်းများအားလုံးသည် ၂၄ နာရီအတွင်းအရှုံးမရှိ၊ အကြွေးမဆပ်သောအရာများဖြင့်ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
သင်၏ကုမ္ပဏီ၏စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်သောပိုင်ဆိုင်မှု (NPA) အစုစုသည်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ၊ ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဘီလီယံသို့မဟုတ်ထိုထက်များသည်ဖြစ်စေအရေးမကြီးပါ။
WTE ၂၄ နာရီအတွင်းစျေးကွက်တန်ဖိုး ၃x ဆသောငွေများကိုသင့်အားအောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းငွေလွှဲပြောင်းပေးရာတွင်ကူညီပေးပါမည်။
ပုံမှန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှတဆင့်၊ များသောအားဖြင့်ကုမ္ပဏီအများစုသည်ရံဖန်ရံခါအမျိုးမျိုးသောကုန်ပစ္စည်းစာရင်းများ၊ အကျိုးအမြတ်မယူသောအရင်းအနှီးများ၊ ပိုလျှံသောအိမ်ခြံမြေများ၊ မဟာဗျူဟာမဟုတ်သောစီးပွားရေးယူနစ်များ၊ အမျိုးအစားအားလုံး၏တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ စွမ်းဆောင်ရည်သို့မဟုတ်လက်ခံနိုင်ဖွယ် ROI ပေး။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဤပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖျက်သိမ်းသည့်အခါ၎င်းတို့သည်စာအုပ်တန်ဖိုး၏ ၁၀ မှ ၃၀% ကိုသာပုံမှန်အားဖြင့်နားလည်ကြသည်။
ဒေါ်လာများပေါ်ရှိတစ်ပြားတစ်ချပ်အတွက်ဤပိုင်ဆိုင်မှုများကိုငွေထုတ်မည့်အစားကုမ္ပဏီများသည်ယခုအခါသူတို့၏တန်ဖိုးအပြည့်အဝ၏ ၁၀၀% အထိသို့မဟုတ်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ကျခြင်း၊ အ World Trade Exchange's (WTE) ပိုင်ဆိုင်မှုပြန်လည်နာလန်ထူဖြေရှင်းချက်။
WTE သင့်ကုမ္ပဏီကိုပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ရက် ၃၀ အတွင်း ၁၀၀x ဖြင့်သင်၏အမြတ်နှင့်အကျိုးအမြတ်အမြောက်အများကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြောင်းပေးလိမ့်မည်!
အရောင်း ၀ င်ငွေကျဆင်းခြင်း၊ ငွေကြေးမပြည့်စုံမှု၊
သငျသညျအလုပ်လုပ်မြို့တော်, မမျှော်လင့်ဘဲအမြတ်အစွန်း၏ပြိုကျမှုများနှင့်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော running ကုန်ကျစရိတ်အပေါ်ညှစ်ခံနေရပါသလား
ရက် ၃၀ အတွင်းသင့်ကုမ္ပဏီကိုလှည့်ပတ်ပါ။
၂၄ နာရီအတွင်း ၀ င်ငွေကို ၁၀၀၀% တိုးပွားအောင်လုပ်ပါ။
၂၄ နာရီအတွင်း ၁၂ လရောင်းအားဝင်ငွေရည်မှန်းချက်ကိုရယူပါ။
မင်းကုမ္ပဏီရဲ့အကြွေးတွေကို ၇ ရက်အတွင်းသုညကုန်ကျမှာမဟုတ်ဘူး။
ရက် ၃၀ အတွင်း ၁၀ ကြိမ်မှ ၁၀၀ အထိသင်၏အရောင်းနှင့်အမြတ်များကိုမြှောက်ပါ။
၉၀% အထိလျှော့စျေးဖြင့် ၀ ယ်ယူမှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ပါ။ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းငွေသားအသုံးစရိတ်များကို ၉၀% အထိလျှော့ချပါ။
သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်“ Business Turnaround Consultation” ကိုစီစဉ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် ၃၀% သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်နေ့စဉ်ငွေရေးကြေးရေးဆုံးရှုံးမှုများကိုဘဏ်များသို့ဒေါ်လာ ၃.၉၇ ဘီလီယံအကြွေးတင်သောငွေသားချို့တဲ့သောကုမ္ပဏီသည်ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းမှတစ်ဆင့်ပြောင်းလဲသွားသည်။ WTE.
WTE အမြန်ကုန်ကျစရိတ်မည်မျှရှိစေကာမူ၊ သင့်အားအန္တရာယ်များစွာရှိသောဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုထူထောင်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
WTE သင်ဝယ်ယူရန်သဘောတူညီချက်အပေါ် အခြေခံ၍ သင်ကြိုတင်ငွေမတောင်းဘဲကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ၊ စက်ယန္တရား၊ ပစ္စည်းကိရိယာနှင့်နည်းပညာတစ်ခုလုံးကိုဝယ်ယူနိုင်လိမ့်မည်။ buyback သဘောတူညီချက်အရ, WTE စက်ပစ္စည်းများ၊ စက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်နည်းပညာများကိုထောက်ပံ့ပြီးထိုစက်ရုံသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းများကိုငွေပေးချေရန်သဘောတူသည်။
ဥပမာ, WTE အမေရိကန်ကုမ္ပဏီအတွက်သံမဏိထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံတည်ထောင်ရန်ကုမ္မဏီပိုင်ရှင်အားကြိုတင်ငွေမတောင်းဘဲစီစဉ်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံနှင့်ငွေရှာခြင်းတို့ကိုစတင်ခဲ့သည်။ စက်ရုံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကိုရည်ညွှန်းထားသည့် ၀ ယ်သူများအားရောင်းချခြင်းဖြင့်ချေးငွေကိုအချိန်ပိုပေးဆပ်ကြသည် WTE။ တစ်နည်းပြောရရင်တော့, WTE ဖောက်သည်များအတွက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုထေမိဖို့လိုအပ်အရောင်းထုတ်လုပ်နိုင်ရန်ကုမ္ပဏီကကူညီပေးခဲ့သည်။ အသင်း ၀ င်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင့်အတွက်ဤအရာကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်နိုင်သည် WTE.
WTE ၀ င်ငွေအသစ် STREAM များကိုဖန်တီးရန်သင့်စီးပွားရေးကိုများပြားစွာမျိုးပွားနိုင်အောင်ကူညီပါလိမ့်မည်။
စီးပွားရေးရှားပါးလာနေပြီလား ဝင်ငွေလျော့သွားပြီလား မင်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဆုတ်ယုတ်နေပြီလား။
မည်သည့်အလုပ်နှင့်မည်သည့်အရာမည်သည့်အရာသည်မည်သည့်အရာနှင့်လုပ်လိမ့်မည်နည်းဆိုသည်မှာကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းများ၊ တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အကြံဥာဏ်များ၊ မဟာဗျူဟာမြောက်လမ်းညွှန်မှုနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုရယူခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သောအတွေ့အကြုံရှိသောကျွမ်းကျင်သူ။
သင်၏စီးပွားရေးဘ ၀ တစ်လျှောက်လျင်မြန်စွာ၊ ထူးခြား။ အဆတိုးစီးပွားရေးတိုးတက်မှုကိုတွေ့ကြုံခံစားကြည့်ပါ။ ဒါကဘာလဲ WTE ကျွမ်းကျင်သူများကသင်အောင်မြင်ရန်ကူညီနိုင်သည်
သင်၏ရလဒ်များကို ၁၀၀% အာမခံထားသည် WTE ပေးတယ် သင်၏စီးပွားရေးသက်တမ်းတစ်လျှောက်လျှင်မြန်သော၊
WTE သင်၏ချေးငွေများနှင့်ဘဏ္ASာရေးပိုင်ဆိုင်မှုများအားစွန့်စားမှုများ၊ ချို့ယွင်းချက်များနှင့်ချေးငွေအဖြစ်အပျက်များအားလုံးအပေါ်အကာအကွယ်ပေးလိမ့်မည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကုမ္ပဏီများနှင့်ငွေချေးသူတစ် ဦး ချင်းသည်သူတို့၏အကြွေးများကိုပြန်မဆပ်နိုင်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ချေးငွေများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်သောပိုင်ဆိုင်မှုများသည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိဘဏ်များနှင့်ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများရင်ဆိုင်နေရသောအကြီးမားဆုံးပြproblemsနာများဖြစ်နေသည်။
မကောင်းသောချေးငွေများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ပြtoနာအတွက်အပြီးသတ်ဖြေရှင်းချက်မှာ WTE ခရက်ဒစ်က default လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်။ နှင့် WTE CDS, သင်သည်သင်၏စာအုပ်များပေါ်တွင်ချေးငွေများကိုမပေးချေခြင်း၊ ပျက်ကွက်မှုများ၊ ဒေဝါလီခံခြင်း၊ အကြွေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအဆင့်လျှော့ချခြင်း၊ တာဝန်တိုးမြှင့်ခြင်း၊ သင်၏ဘဏ္financialာရေးပိုင်ဆိုင်မှုများသည်မပြည့်စုံပါက၊ ဆုံးရှုံးမှုမှန်သမျှကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ပြီးတန်ဖိုးကျဆင်းခြင်းသို့မဟုတ်အကြွေးအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပါကသင်၏လုပ်ဆောင်မှုမရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုများစာအုပ်တန်ဖိုး၏ ၁၀၀% ၏ငွေကြေးလျော်ကြေးကိုသင် CDS မှရရှိမည်ဟု CDS ကအာမခံသည်။
WTE ၂၄ နာရီအတွင်းသင်၏ကုန်ပစ္စည်းအားလုံးကို ၀ ယ်ယူရန် ၀ ယ်ယူသူများယူလာပါလိမ့်မည်။
WTE သင်၏ကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၁ ဘီလီယံအထိအပိုဝယ်ယူရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက်မှ ၀ ယ်ယူသူများကိုယူဆောင်လာလိမ့်မည်။
သင့်အတွက် ၀ ယ်သူများကိုယူဆောင်လာရန်နှင့်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာသောသဘောတူညီမှုကိုသင့်ကိုယ်စားကိုယ်စားပြုရန်အတွက်လဲလှယ်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သင်ပေးသောရောင်းအားတိုင်းအတွက် ၁၀% ကော်မရှင်နှင့်လိုအပ်ပါကသင့်ကိုယ်စား ၀ ယ်ယူခွင့်ရှိသည်။
တစ်နည်းပြောရလျှင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက်မှတစ်ဆင့် ၂၄ နာရီအတွင်းသင့်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များ၏ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း၊ သန်း ၁၀၀၊ ၁၀ ဘီလီယံသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောအရာများကိုရောင်းနိုင်သည်။ World Trade Exchange စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ ကြော်ငြာခြင်း၊
WTE ဆုံးရှုံးမှုများ၊ တန်ဖိုးလျော့နည်းခြင်း၊ လိမ်လည်ခြင်းနှင့်အဖြစ်အပျက်များမကြုံတွေ့ရခြင်းများမှကာကွယ်ရန်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုအကာအကွယ်ပေးလိမ့်မည်။
သင်၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု (သို့) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ဘာမှမမှားကြောင်းအာမခံနိုင်ပါသလား။ မဟုတ်ဘူး!
သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်မနက်ဖြန်၊ နောက်သီတင်းပတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ယခုမှ စ၍ တစ်နှစ်အတွင်းမှားယွင်းနေသောကြောင့်သင်၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာကွယ်မှုလိုအပ်သည်။
အဆိုပါ WTE ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်ကအဲဒီလိုပဲလုပ်တယ်။
အဆိုပါ WTE ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာကွယ်ရေးအစီအစဉ် (IPP) သည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားလုံးကိုစွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ကျခြင်း၊ အန္တရာယ်များ၊ ပျက်ကွက်ခြင်း၊ လိမ်လည်ခြင်း၊ တန်ဖိုးကျဆင်းခြင်း၊ သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ကျခြင်း၊ ROI မရှိခြင်း၊ ဆုံးရှုံးမှုတစ်စုံတစ်ရာရှိခြင်း၊ တန်ဖိုးကျဆင်းခြင်းသို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုကြောင့်ပျက်ကွက်ခြင်းဖြစ်ပါက IPP ကသင့်အားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ ၁၀၀% ၏ဘဏ္projectာရေးလျော်ကြေးကို ၂၄ နာရီအတွင်းရရှိလိမ့်မည်ဟုအာမခံထားသည်။ သင်၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်လိုအပ်သောအချိန်၊ အလုပ်သို့မဟုတ်အားထုတ်မှု။
သင်၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများသည်ဒေါ်လာ ၁၀ မီလျံ၊ ဒေါ်လာ ၁၀၀ မီလျံ၊ ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဘီလျံနှင့်အထက်ရှိမရှိအရေးမကြီးပါ။
WTEနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ၀ န်ဆောင်မှုများသည်နိုင်ငံစုံကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ ဘဏ္institutionsာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိပြည်သူ့ကဏ္ organizations အဖွဲ့အစည်းများအတွက်ဘက်ပေါင်းစုံကုန်သွယ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု၊ GTMS သည်ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သောပလက်ဖောင်းများ၊ ကိရိယာများနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကို အသုံးပြု၍ သုံးစွဲသူများအားဆန်းသစ်။ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။ ၄ င်း၏ဘက်ပေါင်းစုံဖြေရှင်းချက်များတွင်ငွေပေးချေမှုနှင့်ရရန်၊ ငွေဖြစ်လွယ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စီးပွားဖြစ်ကဒ်အစီအစဉ်များ၊
WTE သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ယူပြီးငွေရှာမည်။
WTE သင်၏ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ၌ပါဝင်သောအလုပ်၏ ၁၀၀% ကိုလုပ်လိမ့်မည်။
WTE သင့်အားငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများကို ၂၄ နာရီအတွင်းပြန်လည်ဝင်ငွေရရှိစေရန်ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ ငွေပေးချေမှုမရှိသည့်အန္တရာယ်ကိုဖယ်ရှားပေးပါလိမ့်မည်။
ငွေကြေးမလုံလောက်ခြင်း၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၊ အကြမ်းဖက်မှုအန္တရာယ်များ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်များ၊ ကူးစက်ရောဂါအန္တရာယ်များနှင့်နိုင်ငံရေးအန္တရာယ်များကြောင့်သင်၏ဖောက်သည်များသည်သူတို့၏အကြွေးတွေကိုမဆပ်နိုင်ပါ။
Trade Credit Default Swaps သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအားဖောက်သည်များ၏ပျက်ကွက်မှုနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများမပေးဆောင်ခြင်းမှဘဏ္lossesာရေးဆုံးရှုံးမှုများမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအကာအကွယ်ပေးသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ သင့်ဖောက်သည်ကချေးငွေဆိုင်ရာပေးအပ်သောကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်သင့်ကိုမပေးနိုင်လျှင်၊ WTE သင်၏ဖောက်သည်များထံမှအကြွေးများ၏ ၁၀၀% ကိုပေးဆပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏စီးပွားရေးကိုအကာအကွယ်ပေးသည်။
၎င်းသည်သင်၏အရင်းအနှီးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်၊ ငွေစီးဆင်းမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်၊ ချေးငွေကိုပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်နှင့်ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်တိုးမြှင့်ရန်နှင့်ပျက်ကွက်သည့်မည်သည့်အဖြစ်အပျက်မှမဆို ၀ င်ငွေကိုလုံခြုံရန်အတွက်သေချာစေသည်။
WTE ကွဲပြားခြားနားသောဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ပလက်ဖောင်းများသင့်အားပေးလိမ့်မည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာဘဏ်လုပ်ငန်း - ငွေချေးယူခြင်းနှင့်ငွေစုစာရင်းများ၊ အပေါင်ပစ္စည်းနှင့်ချေးငွေများ၊ ချေးငွေကတ်များ။
စီးပွားရေးဘဏ်လုပ်ငန်း - ကြီးထွားရန်အတွက်ရန်ပုံငွေလိုအပ်သည်ဖြစ်စေ၊ ကြွေးမြီပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်လိုအပ်သည်ဖြစ်စေသင်၏တိုတိုနှင့်ကာလရှည်ငွေကြေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်မှန်ကန်သောအရင်းအနှီးဖွဲ့စည်းပုံကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းထားသည်။
ကော်ပိုရေးရှင်းဘဏ် - ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ၊ ကုန်သွယ်ရေးဘဏ္financeာရေး၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ရှင်းလင်းခြင်း၊ ချေးငွေများ၊ အရင်းအနှီးစျေးကွက်များ၊
ပုဂ္ဂလိကဘဏ် - ချေးငွေနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံခန့်ခွဲမှုမှသည်ရှုပ်ထွေးသောကြွယ်ဝမှုတည်ဆောက်ပုံအထိ၊ သင့်အားပြည်တွင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အလမ်းများနှင့်ဆက်သွယ်ပေးသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ် - ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ဝယ်ယူခြင်း (M&A) အကြံပေးခြင်း၊ Equity နှင့်သက်ဆိုင်သည့်မဟာဗျူဟာမြောက်ငွေကြေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်များ၊ ငွေချေးစာချုပ်ကိစ္စရပ်များ၊
WTE သင့်အား ၉၀% သောငွေအကန့်အနေဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရယူရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
WTE သင် 90% ငွေသားလျှော့စျေးမှာပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားအားလုံးကိုဆည်းပူးကူညီပေးပါမည်။ ရွှေ၊ ငွေ၊ စိန်၊ ရေနံစိမ်း၊ bitcoins၊ ကုမ္ပဏီရှိအစုရှယ်ယာများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဂျက်လေယာဉ်လောင်စာ၊ ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ကြော်ငြာ၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်စားသောက်ကုန်များ ရှေးဟောင်းပစ္စည်း၊ အနုပညာ၊ မော်တော်ယာဉ်များ၊ စီးပွားရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ, စုဆောင်းစရာပစ္စည်းများ၊ ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများ၊ ကွန်ပျူတာများနှင့်ကွန်ရက်ပစ္စည်းများ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်၊ နှင့် 90% ငွေသားလျှော့စျေးမှာအခြားပိုင်ဆိုင်မှု။
WTE သင်၏ကုမ္ပဏီနှင့်စီးပွားရေးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသင်၏ ၂၄ နာရီအတွင်းစျေးနှုန်းအပြည့်ဖြင့်ရောင်းရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
WTE ၂၄ နာရီအတွင်းမည်သည့်ကုမ္ပဏီ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်၊ ၀ ဘ်ဆိုဒ်၊ 24% အာမခံချက်။ ၂၄ နာရီအတွင်းသင့်ကုမ္ပဏီ၊ စီးပွားရေးပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ဂိမ်းများ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ ဒိုမိန်းအမည်များ (သို့) ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာများကိုရောင်းချရန်သင်၏အချိန်တွင်မည်သည့်အလုပ်၊ အချိန်၊ အားစိုက်မှုသို့မဟုတ်အန္တရာယ်မလိုအပ်ပါ။ အလုပ်၏ ၁၀၀% သည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
သင်၏ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်စီးပွားရေးပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးမည်မျှပင်ရှိပါသလား $ 10M, $ 100M, $ 10B သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည်, အရေးမပါ။ သင့်အနေဖြင့်စျေးနှုန်း ၂၄ နာရီအတွင်းသင့်အား ၁၀၀% အာမခံပေးထားသည်။
WTE ၂၄ နာရီအတွင်းအပိုစာရင်းအပြည့်အစုံကိုအပြည့်အဝရောင်းချရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
သင်၏ပိုလျှံစာရင်း၏ငွေကြေးတန်ဖိုးမည်မျှပင်အရေးကြီးသည်၊ WTE ၂၄ နာရီအတွင်းရောင်းချရန်အာမခံပါသည်။ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းသည်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း၊ သန်း ၁၀၀ မှ ၁ ဘီလီယံသို့ဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလီယံထက်ကျော်သည်ဖြစ်စေ၊ ၂၄ နာရီအတွင်းသင့်ထုတ်ကုန်အားလုံးကို ၁၀၀% စွန့်စားမှုကင်းလွတ်စွာရောင်းမည်။
သင်ပိုင်ဆိုင်သည်ဖြစ်စေကြီးမားသည်ဖြစ်စေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသေးငယ်သည်ဖြစ်စေအရေးမပါဘူး။ သင်၏လုပ်ငန်းသည်ရင့်ကျက်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ အမြန်တိုးတက်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၊ လုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်နယ်ပယ်စျေးကွက်အထူးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ကိစ္စမရှိပါဘူး ၎င်းသည်လက်လီ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်မှု၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ ၀ န်ဆောင်မှု၊ နည်းပညာ၊
အလုပ်ချိန်၊ အချိန်ကာလ၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ အန္တရာယ်များမရှိပါ။ ၂၄ နာရီအတွင်းသင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုရောင်းရန်သင်၏အပိုင်းတွင်သင်၏အပိုင်းတွင်မလိုအပ်ပါ။ သင့်အားဈေးနှုန်းအပြည့်ဖြင့်ရောင်းရန် ၂၄ နာရီအတွင်း ၁၀၀% အာမခံထားသည်။
WTE သင့်အားရက် ၃၀ အတွင်း ၁၀,၀၀၀% တိုးမြှင့်ပေးငွေတိုးမြှင့်ခြင်းကိုကူညီပါလိမ့်မည်။
WTE သင့်အနေဖြင့်စွန့်စားမှု၊ အားထုတ်မှုသို့မဟုတ်အသုံးစရိတ်များမပါဘဲရက် ၃၀ အတွင်းသင်၏ဝင်ငွေကို ၁၀၀၀% နှင့်အထက်တိုးရန်ကူညီလိမ့်မည်။
WTE သင့်လုပ်ငန်း၏အနာဂတ်ဝင်ငွေကိုခန့်မှန်းပြီးထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများမတိုင်မီ ၂၄ နာရီအတွင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းအနာဂတ်ဝင်ငွေကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်။
WTE သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်စာရင်းပိုလျှံမှုကို ၂၄ နာရီအတွင်းအပြည့်အဝရောင်းရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ လျှော့ခြင်း၊ ချေးခြင်းသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးခြင်းမရှိပါ။ သငျသညျနိမ့်ကျပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ပိုလျှံစာရင်းကနေအများဆုံးတန်ဖိုးကိုနားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်။
WTE သင့်ရဲ့ ID ကိုသီးသန့်ထားရှိနေချိန်မှာသင့်ကိုပိုက်ဆံတချိူ့ကမ္ဘာကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
သင်၏ privacy နှင့်အများဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုအတွက်အမည်မသိငွေလွှဲခြင်းကိုသင်ပြုလုပ်လိုပေမည်။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအားမည်သည့်ဘဏ်သို့မဟုတ်ဘဏ္institutionsာရေးအဖွဲ့အစည်းများအား ၀ င်ရောက်ခွင့်မပေးလိုပါ။
သင်သည်သင်၏အမှတ်အသားကိုရေဒါတွင်မထားရှိဘဲသိသိသာသာငွေကြေးဆိုင်ရာအရောင်းအ ၀ ယ်များတွင်ပါဝင်လိုသည်။
သင်ပြောင်းရွှေ့လိုသောပမာဏသည်ဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံ၊ ဒေါ်လာ ၁၀၀ မီလီယံ၊ ၅၀ ဘီလျံဒေါ်လာနှင့်အထက်ဖြစ်ပါစေအရေးမကြီးပါ။
WTE သင်တို့အတွက်မတူညီသောဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကုန်သွယ်ရေးလဲလှယ်ရေးလုပ်ငန်း ၄၀ ကိုတည်ထောင်မည်။
အဆိုပါကုန်သွယ်မှုလဲလှယ်ရေးလုပ်ငန်းပုံစံ ၄၀ တွင်အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။
၁။ ဒေါ်လာဘီလီယံဖလှယ်ခြင်း။ ၂ ။ ၃။ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာချေးငွေရယူခြင်း။ 1. နေရာထိုင်ခင်းပေးသူကုန်သွယ်ရေးလဲလှယ်ရေး။ ၅။ ကြော်ငြာနှင့်မီဒီယာကုမ္ပဏီများကုန်သွယ်မှုလဲလှယ်ရေး။ ၆ ။ ၇။ မော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းကုန်သွယ်ရေးလဲလှယ်ရေးလုပ်ငန်း ၈။ ဘဏ်များနှင့်ဘဏ္Instာရေးအဖွဲ့အစည်းများကုန်သွယ်မှုလဲလှယ်ရေး။ ၉။ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများကုန်သွယ်ရေးလဲလှယ်ရေးလုပ်ငန်း။ ၁၀။ သွားနှင့်ကျန်းမာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကုန်သွယ်မှုလဲလှယ်ရေး။ 2. ဖျော်ဖြေရေးနေရာကုန်သွယ်ရေးလဲလှယ်ရေး။ ၁၂။ ကျန်းမာရေးနှင့်အလှအပ ၀ န်ဆောင်မှုများကုန်သွယ်ရေးလဲလှယ်ရေးလုပ်ငန်း ၁၃ ။ 3. ဆေးရုံများကုန်သွယ်ရေးလဲလှယ်ရေး။ ၁၅။ ချေးငွေလဲလှယ်ခြင်း ၁၆။ အကြွေးလဲလှယ်ခြင်း။ ၁၇ ။ 4. CounterTrade ချိန်း 5. အကျိုးဆောင်ချိန်း။ 6. အကြွေးအကျိုးဆောင်။ ၂၂ ။ အိမ်ခြံမြေနှင့်အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်ရေး။ 7. ကုန်သွယ်မှုချေးငွေလဲလှယ်ရေး။ ၂၄ ။
25. ထုတ်လုပ်သူကုန်သွယ်ရေး Exchange ။ 26. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များကုန်သွယ်ရေးလဲလှယ်ရေး။ ၂၇ ။ 27. အိမ်ခြံမြေ developer များကုန်သွယ်မှု Exchange ။ ၂၉။ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကုန်သွယ်ရေးလဲလှယ်ရေးလုပ်ငန်း။ 28. လက်လီဆိုင်များကုန်သွယ်ရေးလဲလှယ်ရေး။ ၃၁. လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများကုန်သွယ်ရေးလဲလှယ်ရေးလုပ်ငန်း 29. ယာဉ်များကုန်သွယ်ရေးလဲလှယ်ရေး။ 30. အကယ်ဒမီချိန်း 31. ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းစဉ်ဖလှယ်ရေး။ 32. 33- နာရီအရောင်းချိန်း။ ၃၆။ စီးပွားရေးနှင့် franchise ကုန်သွယ်ရေးလဲလှယ်ရေးလုပ်ငန်း။ 34. ကုသရေးဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ်ရေးလဲလှယ်ရေး။ 35 လိုင်စင်ချိန်း။ 24. Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်။ 36. လက္ကားကုန်သွယ်ရေးလဲလှယ်ရေး။
WTE သင့်၏ဒီဇိုင်းကိုတည်ဆောက်ခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း၊ စတင်ခြင်းနှင့်မဖြစ်နိုင်သည့်ပန်းတိုင်များကိုရရှိရန်သင့် DIGITAL BANK ကိုလုပ်ဆောင်ရန်ကူညီပါလိမ့်မည်။
သင်၏ဘဏ်စနစ်တည်ဆောက်ပုံမှတစ်ဆင့်သင်ထင်သည်ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာမြန်မြန်ဆန်ဆန်အောင်မြင်နိုင်သည့်မဖြစ်နိုင်သည့်စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်အချို့ရှိသည်။ WTE သင်၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ရန်သင်၏ဘဏ်လုပ်ငန်းပုံစံကိုအစ မှစတင်၍ စတင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ သင်၏ဘဏ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူ၊
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့အကြွေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ သင်၏ငွေရေးကြေးရေးအရောင်းအ ၀ ယ်များတွင်အသုံးပြုရန်သင်၏အကြွေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ခရက်ဒစ်အစီရင်ခံစာကိုထိန်းချုပ်ပါ။ သင့်ရဲ့ခရက်ဒစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင့်ဘဏ်ကဘာပြောသလဲဆိုတာကိုထိန်းချုပ်ပြီးစီရင်နိုင်ရင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
သင်၏သတ်မှတ်ထားသောနှုန်းထားအတိုင်းငွေစက္ကူများ (ဥပမာ - ငွေချေးစာချုပ်များ၊ ငွေစက္ကူများစသည်တို့) ကိုရေးဆွဲပါ။
သင်၏အခွန်ကို ၀% အထိတရားဝင်လျှော့ချပြီးသင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးအတွက်အကာအကွယ်အမြင့်ဆုံးသတ်မှတ်ထားပါ။
နှင့်များစွာသောအခြား။ အောက်ဖော်ပြပါလင့်ခ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ဘဏ်နှင့်တရား ၀ င်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ဘဏ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ၄၀ ကိုပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အခြေပြုသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ ဘဏ်များနှင့်အာမခံလုပ်ငန်းများမှအသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် FinTechs များအထိကျွန်ုပ်တို့၏ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နှင့်အသားတင် ၀ င်ငွေအသစ်ရရှိရန်အထိဆောင်ရွက်သည်။
WTE ငွေရေးကြေးရေးအတက်အကျ၊ ကန်ထရိုက်၊ ဘဏ္,ာရေး၊ ချေးငွေ၊ စျေးကွက်၊ ငွေဖြစ်လွယ်မှုနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာအန္တရာယ်များကိုကာကွယ်ခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးအန္တရာယ်များကိုဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်။ မသေချာမရေရာမှု၊ ပျက်ကွက်မှု၊ ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အန္တရာယ်များကိုဖယ်ထုတ်ပါ။
WTE ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိရှုပ်ထွေးသောနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဆောင်ရွက်မှုများအတွက်ပင်သင်၏အကောင့်ကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီအသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်။ WTE ရောင်း ၀ ယ်ငွေတောင်းခံလွှာများကောက်ယူစုဆောင်းခြင်း၏စွန့်စားရမှုနှင့်စွမ်းရည်နိမ့်ကျမှုကိုသင်ဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်။
သင့်အတွက် ၁၀၀% စွန့်စားမှုကင်းမဲ့သောလုပ်ဆောင်မှုများ -
ရောင်းချသူသည်မည်သည့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းမဆိုကြိုတင်ငွေပေးချေရမည်။ ထို့ကြောင့်ငွေပေးချေမှုမပြုခြင်း၏အန္တရာယ်မရှိပါ။ ၀ ယ်သူများ၏အရောင်းအ ၀ ယ်များသည်ဆုံးရှုံးမှုမှန်သမျှမှကင်းလွတ်ပြီးအာမခံထားကြောင်းသေချာစေရန်၊ WTE ၀ ယ်သူတိုင်းအားအာမခံနှောင်ကြိုးပေးမည်။
WTE သင်၏စီးပွားရေးတွင်ကုန်ကျစရိတ်များကိုရက် ၃၀ အတွင်း ၉၀% လျှော့ချရန်ကူညီပါလိမ့်မည်။
WTE ထုတ်လုပ်မှု၊ စီမံကိန်းများနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကိုရလဒ်များကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲ ၉၀% အထိလျှော့ချရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်ကုန်ကျစရိတ်အတွက်ငွေသားထွက်ငွေကို ၉၀% လျှော့ချနိုင်သည်။
WTE သင်၏အသုံးစရိတ်များကိုကုန်ကျစရိတ်သုည နည်း၍ သင့်ကုန်ကျစရိတ်၏ ၉၀% ကိုလျော်ကြေးပေးလိမ့်မည်။
WTE စီးပွားရေးလည်ပတ်မှုများကိုချုံ့ခြင်းမရှိဘဲသင်၏လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို ၉၀% လျှော့ချလိမ့်မည်။
TE သည်ထုတ်လုပ်မှုကိုလျှော့ချခြင်းမပြုဘဲသင်၏ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို ၉၀% လျှော့ချလိမ့်မည်။
WTE ၀ န်ထမ်းများ၊ လစာများသို့မဟုတ်သက်သာခွင့်များကိုလျှော့ချခြင်းမရှိဘဲအလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်ကို ၉၀% လျှော့ချလိမ့်မည်
သင်၏ရလဒ်များကို ၁၀၀% အာမခံထားသည် WTE မင်းအတွက်အလုပ်